မကျည်းတန်ရဲ့ ကမ္မဖလ(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးများဖတ်ရန်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မကျည်းတန်ရဲ့ ကမ္မဖလ(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးများဖတ်ရန်)
Posted by ရွာသူလေးချမ်းချမ်း(ရင်တွင်းဖြစ်) on Jun 4, 2011 in Copy/Paste |2comments
“ဟဲ့….မိန်းကလေးရဲ့ ၊သားသမီးတွေအားလုံး အချောအလှချည်းပဲ နင်တစ်ယောက်ပဲ ဘယ် ကအဘွားကြီးဝင်စားမှန်းမသိ၊နင့်ဘာသာနင် ခါးကုန်း ပြီး ငါ့ဗိုက်ထဲက ထွက်လာတာငါကဘာတတ်နိုင်မှာတုန်း”
ယခုတော့ နုံချာလွန်းလှသည့်သူမဘ၀က သူတစ်ပါးခြေဖ၀ါးအောက်ကမြေမှုန့် …
“အိုလေ…ဒီအကြောင်းတွေ ပြန်ပြောင်းလဲမတွေးချင်တော့ပါဘူး”…ဟု ဦးခေါင်းကို ဆတ်ခနဲ ခါရမ်းပစ်လိုက်သည်။
ထိုစဉ်မှာ….“အဖွားကြီးအိုအို ခါးကုန်းကုန်း မသေပါနဲ့ ဦး” ဟု..လမ်းပေါ်က ကလေးတစ်ချို့မကြားတကြား နောက်ပြောင်
“ပန်းမရောင်းလို့ မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ဒေါ်သုမနရယ်.လေးကျပ်ဖိုးတော့ရောင်းပေးပါ နေ့ တိုင်းဝယ်နေကြပဲဟာ….”
ပြုလုပ်တာကြောင့်ပဋိသန္ဓေ နေမှု ဖြစ် ……အဲ့ဒီမှာ ဘ၀ဆိုတာ ကမ္မ ဘ၀ပါပဲ..စေတနာပါတဲ့ပြုလုပ်မှုကို ပါဠိလို ကမ္မလို့ ခေါ်တယ်။ ကမ္မကနေပြီး ကံ..ဆိုတဲ့စကား ဖြစ်လာတာပဲ..
မိမိတို့ ရဲ့ …အပြုအမူ..အပြောအဆို..အကြံအစည်..ကောင်းမကောင်းအပေါ်တိုက်ရိုက်မူတည်တယ်။ ဒါ့ကြောင့်လဲဘယ်သူမပြုမိမိမှု
အတိတ်နှင့်အနာဂတ်သံသရာ၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ် တရား….ဤရှစ်ပါး တို့ ၌ ၀ိစိကိစ္စာ ယုံမှားသံသယ ရှိခြင်းကိုလည်း
“ဒီလိုဆိုရင် ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်ကို နာနေလို့ နောက်ကျတယ်ပေါ့….ဟုတ်လား”
“ဟောပြနိုင်ပါတယ်…အရှင်မ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်တွေ ကို ကျွန်တော်မျိုးမ တစ်လုံးတစ်ပါဒမျှမကျန် ရအောင်မှတ်သားနိုင်ခဲ့ပါတယ်..
ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ဆိုတာက…..သစ္စာလေးပါးတရားကို ကိုယ်တိုင်ပဲသိပြီးသူတစ်ပါးကိုမဟောပြနိုင်ပါဘူး။ဘုရားတော့ဘုရားပါဘဲ.နားလည်အောင်ပြောရင်တော့ဘုရားငယ်ပေါ့.
(၁) သာမာဝတီ မိဖုရား…“အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးမေတ္တာရှင်(မေတ္တာဝိဟာ၇ီ) ဧတဒဂ်ဘွဲ့ ”
(၂)ခုဇ္ဇုတ္တရာ ကျွန်မ……..“အကြားအမြင် ဗဟုသုတ အသာဆုံးအမြတ်ဆုံး ဧတဒဂ်ဘွဲ့ ”
(၃)သူဌေးမလေးဥတ္တရာ…“မေတ္တာဈာန်ဝင်စားရာမှာ အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဧတဒဂ်ဘွဲ့ ”
(၄)သူဌေးသမီး…သုဇာတာ..“ပထမဦးစွာသရဏဂုံတည်သောအရာဝယ် အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဧတဒဂ်ဘွဲ့ ”
(၅) ရဟန်းအမကြီး ကာတိယာနီ… “သာသနာတော်ကိုမတုန်မလှုပ်သက်ဝင်ယုံကြည်သည့်အရာတွင်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဧတဒဂ်ဘွဲ့ ”
(၆)ဥပါသိကာမ….ကာလီ..“တဆင့်ကြားရုံဖြင့် ရတနာသုံပါအား ကြည်ညိုသောအရာတွင် အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဧတဒဂ်ဘွဲ့ ”
(၇)ဥပါသိကာမ သုပ္ပိယာ….“သူနာကိုထူးချွန်စွာပြုစုသော အရာဝယ် အသာဆုံးအမြတ်ဆုံး (ဂိလာနုပဌာကီ )ဧတဒဂ်ဘွဲ့ ”
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များအတွက် မှတ်သားထားရမယ့်အချက်က …
ဗုဒ္ဓရဲ့ ဟောကြားထားထားတဲ့ “Dhama” ဆိုတဲ့ “တရား” သည် “ Religion” မဟုတ်ပါတဲ့…
ဗုဒ္ဓဟောတဲ့ ”Dhama”မှာတော့ ယုံကြည်မှု = belief,ကိုးကွယ်မှု = worship,ဆုတောင်းမှု =prayer .ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုးမပါပါဘူး။
For Learning…….သင်ကြားဖို့ 
For Practice…….. ကျင့်ဖို့ 
For Penetration….ထိုးထွင်းသိမြင်ဖို့ 
မင်းကျင့်တရား (၁၀)ပါနဲ့ လဲ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ပါတယ်.စီးပွါးရေးလဲ ကောင်းကြပါတယ်.
ဗုဒ္ဓစာပေတွေကို ခုလို အားကြိုးမာန်တက် ရေးသားတင်ပြနေတာ ချီးကျူးပါတယ်။ အရေးအသားကလည်း ကောင်းလို့စွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက် ရေးသားတင်ပြပေးပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
စောင်ခြုံရေ…အဲ..ချမ်းချမ်းရေ၊ နာမည်လေးခေါ်ရတာရေခဲရေနဲ့လောင်းလိုက်သလို စိမ့်သွားတာပဲ။ အမျိုးသားတွေရော ဖတ်လို့မရဘူးလား။